जनसम्पर्क समितिद्वारा न्यूयोर्कमा राहत वितरण - Himalayamail.com
न्यूयोर्क,अमेरिका। नेपाली जनसम्पर्क समिति,अमेरिकाले कोरोना अति प्रभावित न्यूयोर्क राज्यमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरुलाई राहत वितरण गरेको छ। आइतवार न्यूयोर्कमा कोरोना बिरुद्ध सचेतना एबं सहयोग समुहमार्फत समितिले विद्यार्थी भीसामा रहेका ५८ जना विद्यार्थीहरुलाई आवश्यक खाध्य सामाग्री वितरण गरिएको नेपाली जनसम्पर्क समितिका सभापति आनन्द विष्टले जानकारी दिनु भएको छ। समितिले समूहका स्वयम्सेवकहरुमार्फत ती विद्यार्थीहरुको घर-घरमा पुगेर खाध्य सामाग्री वितरण गरेको थियो। आइतवारको राहत वितरणका लागि District 34 Assembly member candidate Nuala O’Doherty-Naranjo ले ५८ जना विद्यार्थीहरुलाई थप खाध्य सामाग्रीहरु उपलब्ध गराएकी थिइन्। खाध्य सामाग्रीसहित उनी स्वयम् सहभागी थिइन्।
आइतवार वितरण गरिएको राहतका लागि जनसम्पर्क समितिका सदस्यहरुले सहयोग गरेका थिए। राहत वितरणपछि सभापति विष्टले स्वयम्सेवक र सहयोगीहरुलाई धन्यवाद दिंदै आफ्नो फेसबुक वालमार्फत सार्वजनिक गरेको यो नोट:
1 राज कुमार बिष्ट2.बिष्णु राना मगर3.पासाङ शेर्पा4.अच्यूत सिग्देल5. नब राज केसि6.मिलन शाही7.शिव बाँनिया8.अनिल पाण्डे9.संगिता बिष्ट10.छिरिङ योञ्जन
11.टेक गुरुङ12. नवराज खड्का13.सोनाम गेल्बु शेर्पा14.यम लामा15.सोमेन्न्द्र रन्जित16.भरत संग्रोला17.कृष्ण आचर्य18.खिम भट्टराई19.कृष्ण पौडेल20.आङ छिरिङ शेर्पा21.पुषर महन्त22. आनन्द बिष्ट .